Miady amin’ny fahadisoam-panantenana amin’ny alalan’ny vazivazy ny mpisera Twitter avy ao Makedonia Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Manala azy amin'ny sary-sy-soratra rehefa tsy tafiditra Vondrona Eoropeana
Voadika ny 06 Novambra 2019 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Shqip, Español, English
Tolokevitra “sainam-pirenena Makedoniana vaovao” ahitana diagrama veto frantsay mba hiantohana fihaonana hanombohana fifampidinihana fidirana ao amin'ny EU miaraka amin'i Makedonia Avaratra. Sary voamboatran'i @banekoma, nahazoana alalana.
Mafy iny faran'ny herinandro 19 oktobra 2019 iny ho an'i Makedonia Avaratra sy i Albania, satria tsy nody ventiny ny fihaonana efa niomanana hatry ny ela hanombohana fifampiraharahana haha-mpikambana Vondrona Eoropeana ireo firenena balkana tandrefana roa, noho ny tsy fanohanan'i Frantsa azy ireo amin'ny ankapobeny.
Na dia teo aza ny fandrisihana mazava avy amin'ny Vaomiera Eoropeana hiantohana ny fihaonana, na ireo minisitry ny raharaham-bahiny nivory tao Luxembourg miatrika ny Filankevi-dRaharaha Ankapobeny tamin'ny 15 Oktobra, na ireo mpitarika faratampony amin'ny firenena lehibe mpikambana nihaona tao amin'ny Vaomiera Eoropeana tamin'ny 17 sy 18 Oktobra dia samy tsy nahitana ny marimaritra iraisana. Ny vokany? Fanemorana indray ny fahapahan-kevitra izay efa tratra aoriana.
Nahatery ny praiminisitra makedoniana Zoran Zaev hanao fifidianana mialoha ny fotoana ny tsy fanapahan'ny Vondrona Eoropeana hevitra. “Nisy tsy rariny goavana nahatra tamintsika… Diso fanantenana sy tezitra aho ary fantatro fa mitovy fahatsapana amiko tahaka izany ihany koa ny vahoakantsika,” hoy izy tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanora-gazety tamin'ny 21 Oktobra. Nahatapaka ny 12 taona nitondran'ny governemanta nasionalista ankavanana tao Makedonia Avaratra nifidianana an'i Zaev avy amin'ny sehatra pro-EU tamin'ny taona 2017.
Samy diso fanantenana mitovy amin'i Zaev ihany koa ireo mpitarika ambony ao amin'ny Vondrona Eoropeana, anisan'izany ny kaomisera misahana ny fampivelarana Johannes Hahn, izay nizara ny ahiahiny amin'ny fampanesorana ny fitokisana ny Vondrona Eoropeana. Fa nanao ahoana ny setriny nataon'ny mpiseran'ny media sosialy avy ao Makedonia Avaratra, izay maro tamin'izy ireo no nanantena fa ho haingana araka izay araka azo atao ny fahafahan'ny firenena hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana, isan-karazany izany ka misy ireo gaga sy tohina ka hatramin'ny … mamazivazy.
Nihorakora-pifaliana ireo mpikambana ao amin'ny tafika mpandoto rindrina manampifandraisana amin'ny antoko politika ao amin'ny fanoherana lehibe indrinda ao amin'ny firenena sady manararaotra ny fotoana hanaratsiana endrika ireo mpamoaka hevitra mpanohana ny vondrona eoropeana. Misy vavahadim-propagandy iray, ohatra, namoaka sary sioka faikany efa namboamboarina, milaza fa misy mpanora-gazety iray nanompaompa tenim-pankahalana vahoaka frantsay sy Roma.
Mbola namerina ny fitakiany indray hialan'ny governemanta ireo nasionalista izay nahazo karazam-panohanana avy ao Kremlin ny antokony; ary eo ihany koa ny faniriana handravàna ny Dinan'i Prespa — izay nanova ny anaran'ny fireneny ho fepetra mialoha arahana raha te-ho mpikambana ao amin'ny UE sy ny OTAN
Fa tahaka izay mpitranga any amin'ireo fifanenjanana ara-politika hafa [mg], anefa, misy ireo mpiserasera aterineto mandoatra ny sorisoriny amin'ny alalan'ny fanalana azy :
Misy aza moa mpisera Twitter iray nanontany sao dia nitana lolompo ny frantsay hatramin'ny taona 2012, rehefa naka tahaka ny Arc de Triomphe ao Paris ny fitondrana mpandrendri-bahoaka ao Makedonia Avaratra, nanao dika mitovy aminy tamin'ny tetikasa Skopje 2014.
Tamin'ny 16 oktobra, nilaza ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa iray amin'ny antony tsy nanekeny ny fivelaran'ny Vondrona Eoropeana mankany Balkan andrefana ny habetsak'ireo mangataka fialokalofana azon'i Frantsa avy amin'ny olompirenena Albaney. Namaly tamin'ny alalan'ny sioka nahazo fampitan-tsioka mihoatra ny zato sy tia mihoatra ny eninjato ny kaonty maneson'i Mile Panika. Ilay naneho indrindra ny toe-javamisy izay mety haharatsiratsy kokoa ny fifindramonim-bahoaka :
Mpikambana ao amin'ny fandaharana mampihomehy ao amin'ny fahitalavitra K – 15 iray ao an-toerana i Mile Panika, izay nikatona rehefa noteren'ny fitondrana nasionalista an'i Nikola Gruevski hanidy ny famoaham-bola ny mpanohana ny fandaharana. Nitety ny media sosialy ny iray amin'ireo sehon'hatsikana fahiny maneso ny fifaharan'ny EU tsy hampiditra an'i Balkan Andrefana — nilaza ny vavahadin-tserasera iray ao an-toerana fa “nahalaza ny hoavy amin'ny angeson'ny Simpsons” izany.
Nanolo-kevitra ilay hatsikana handrohy an'i Makedonia amin'i Montenegro, izay mety hitondra tombontsoa maro tahaka ny fahazoana mankeny an-dranomasina ho an'i Makedonia tafiditra an-habakeban-tany sady mamaha ny olan'ny resaka anarana amin'i Gresy (tsy azo nivalozana tamin'izany fotoana), ary ny anaran'ny fanjakana vaovao dia miara-mitondra ny anaran'i Montenegro sy Makedonia Avaratra: “Makedonia Mainty.”
Eo ampiatrehana ny hery tsy tia fivelarana ao anatin'ny Vondrona Eoropeana tsy hamela hiditra mpikambana vaovao ao amin'izao fiainana izao, nitodika any amin'ny singa ara-kolontsaina iray hafa malaza ny manampahazana amin'ny teknolojian-torohay Ilijanco Gagovski izay mety fantatr'ireo teraka talohan'ny taona 1980 tsara. Nampahatsiahiviny ny fomba fiteny iray malaza fanaon'ilay mpitarika Yogoslavy Josip Broz Tito amin'ireo politikam-panavaozana anatiny hananganana indray ny firenena taorian'ny ady lehibe faharoa sy ny fiomanana hiaro ny fahaleovantena manoloana ny fananiham-bohitry ny vahiny mandritra ny Ady Mangatsiaka :
Farany i @banekoma, mpamolavola bikan'asa sady mpikatroka, ary efa namoaka hevitra maneso tany amin'ireo tsenan-kevitra isankarazany tamin'ny volavolantsaina makedoniana vaovao, no nanolo-kevitra hanavao ny endriky ny sainan'ny Vondrona Eoropeana ahitana ny mpiantsehatra voalohany ao amin'ny sarimiaina Italiana-Japoney Calimero. Ao Makedonia Avaratra, malaza amin'ny famaliny mahazatra ity vorona ratsy vintana ity, “Tsy rariny!”